Local Media - महामारी रोक्न पठाएको औषधिको बाटोमै गुज्रियो म्याद,बिरामीलाई के औषधि दिने ?
नगरप्रमुखविरुद्ध कार्यालयमा वडाअध्यक्षहरुको धर्ना,वडाका योजनालाई लत्याएको आरोप • क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि इच्छाकामनामा अध्यक्ष गुरुङको संयोजकत्वमा सहयोग समिति गठन • मकवानपुरमा भीषण वर्षा, बाटो अबरुद्ध, गाडीलाई खोलाले बगायो • आज र भोलि देशभर पानी पर्ने सम्भावना • असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्ने भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट हटाइए • असारमा १२१ महिला हिंसाका घटना •
महामारी रोक्न पठाएको औषधिको बाटोमै गुज्रियो म्याद,बिरामीलाई के औषधि दिने ?
प्रकाशित समय: बिहिवार, ०६ : ३९ बजे बैशाख २६ गते
जाजरकोट- जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटले महामारी हुन सक्ने ठाउँमा पठाएको औषधि, बाटोमै म्याद गएको खुलासा भएको छ । जिल्लामा महामारी हुनसक्ने सम्भावित ठाउँमा तयारी हालतमा राखी पठाउने भन्दै राखिएको औषधि बाटोमै म्याद गुज्रेपछि समस्या भएको हो ।
गर्मीयाम शुरु भएसँगै जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा झाडापखाला, टाइफाइट, ज्वरोजस्ता समस्या देखिन थालेपछि औषधि अभाव हुन नदिन जिल्लाका मुख्यमुख्य ठाउँमा तयारी हालतमा राखिएको औषधि म्याद गुज्रेको पाइएको हो । जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यालय, जाजरकोटले पठाएको औषधि म्याद नाघेका हो । अधिकांश औषधिको म्याद हप्ता दिन मात्र बाँकी रहेको छ भने केही औषधिको म्याद सकिएको पाइएको छ ।
स्टासेफ नामक औषधि बढी म्याद गुज्रेको पाइएको नगरस्वास्थ्य शाखा नलगाड नगरपालिकाका प्रचण्ड कार्कीले जानकारी दिनुभयो । नलगाड नगरपालिकाको दल्ली, लहँ र चौखामा पठाएको औषधिमा म्याद गुर्जेको खबर आएको कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाटोमै म्याद गुज्र्रेको पठाएको औषधि जम्मा गरेर राख्न र प्रयोग नगर्न भनिएको छ, स्वास्थ्य कार्यालयबाट आएको औषधिमा त्यस्तो समस्या छ ।” जाजरकोटका दुर्गम गाउँमा पठाएको औषधि त्यस्तो भएमा तत्काल वितरण रोक्नका लागि पहल गर्ने स्वास्थ्य प्रमुख गौरव ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबै ठाउँमा सो औषधि पठाएको छ, म्याद गुज्र्रेको भए तत्काल रोक्ने पहिलो काम हुनेछ ।” गर्मी मौसम शुरु भएसँगै जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा बिरामीको चाप बढेको छ । औषधि कम हुन नदिनका लागि पठाएका औषधि बाटोमै म्याद गुज्र्रेपछि कसरी उपचार गर्ने भनेर समस्यमा परेको स्वास्थ्य चौकी चौखाले बताएको छ ।
औषधि वितरण गर्दा ध्यान नदिएको भन्दै नागरिक अगुवाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मानव स्वास्थ्यमाथिको वेवास्ता गरिएको भन्दै नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले भन्नुभयो, “वर्षांैदेखि स्वास्थ्य कार्यालयले म्याद गुज्र्रेका औषधि वितरण गर्दै आएको थियो । अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई साछी राखेर औषधि वितरण भएको छ, यो चरण अमानवीय खेल हो ।”